कपालभाती प्राणायाम : मानवजीवनका लागि वरदान | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
कपालभाती प्राणायाम : मानवजीवनका लागि वरदान
२०७७ कार्तिक ४, मंगलवार ०७:५८ गते
धेरै पहिलादेखि नै श्वासप्रश्वासका प्रविधिहरु अपनाई आफ्नो पूरा शरीर स्वस्थ राख्ने प्रयास मानिसले गर्दै आएका हुन् । यसलाई सुरूमा योगको दृष्टिले हेर्दा यौगिक श्वासप्रश्वास भनिन्थ्यो । यही क्रममा कपालभातीजस्तो अत्यन्तै मह¤वपूर्ण प्राणायाम पनि अस्तित्वमा आएको हो । यदि विधिपूर्वक कपालभाती प्राणायाम नियमितरुपमा गर्ने हो भने राम्रा परिणामहरु छोटो समयमा नै देख्न सकिन्छ । सबै किसिमका श्वासप्रश्वास वा प्राणायामका विधिहरुमध्ये कपालभातीलाई शरीर स्वस्थ र पवित्र राख्ने विधि भनिन्छ । कपाल भनेको खप्पर वा टाउको, भाती भनेको चमक र प्राणायाम भनेको श्वासप्रश्वासको विधि अथवा कपालभातीलाई आभामण्डलमा चमक ल्याउने श्वासप्रश्वासको तरिका पनि भनिन्छ । यसको अर्थ नियमितरुपमा यस्तो अभ्यास गर्नाले टाउकोको भागमा चमक आउनु, आभामण्डल उज्यालो हुनु वा बुद्धि प्राप्त गर्नु भन्ने बुझिन्छ । अथवा अनुहारको छाला, कपाल र मस्तिष्क चमकदार, सुन्दर तथा स्वस्थ बनाउनु भन्ने लाग्छ ।
कपालभातीमा सामान्य अभ्यासले निकै प्रभावकारी फाइदाहरु दिन्छ । यो एउटा सत क्रिया प्रविधि हो, जसले शरीरको दूषित हावा बाहिर निकाल्छ र शरीरको शुद्धीकरण गर्छ । यो प्रक्रियासँगसँगै मानसिक र शारीरिक फाइदाहरु समेत हुन्छन् । कपालभाती गर्दा योगासन (सुखासन वा पद्मासन)मा ढाड, कम्मर सीधा बनाई आँखा बन्द गरी आनन्दले बसेर श्वासप्रश्वास प्रक्रिया जारी राखिन्छ । सकभर समयको ख्याल गरी कति मिनेट गरियो भन्ने कुरा हेरेर गर्नुपर्छ । यो योगको आठौँ अंग भएको कुरा ऋषि पतञ्जलिले बताएका छन् । कपालभातीको अभ्यासले स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर र स्वस्थ आत्माको प्राप्ति हुन्छ ।
कपालभाती कसरी गर्ने ?
सामान्यरुपमा हामीले श्वास लिनुलाई सक्रिय प्रक्रिया र छोड्नुलाई निष्क्रिय प्रक्रिया भनिन्छ । तर, कपालभातीमा यो ठीक उल्टो प्रक्रियाबाट सम्पन्न गरिन्छ । यस प्रक्रियामा श्वास बलपूर्वक बाहिर फ्याँकिन्छ र श्वास लिएको थाहै हुँदैन वा श्वास लिँदा कुनै बल प्रयोग गरिँदैन । श्वास लिँदा र छाड्दा कुनै ग्याप गर्नुहुँदैन । यीबाहेक कपालभातीको अभ्यास निम्न विधिहरु अपनाइ गर्नुपर्छ :
१. सही आसनमा बस्ने
सुखासन वा सजिलो आसनमा बस्ने र दुवै हात घुँडामा राख्ने, अनुहार सीधा उठाउने र ध्यान पेटको क्षेत्रमा दिने ।
२. राम्रोसँग श्वास लिने
दुवै नाकबाट गहिरोसँग श्वास तानी फोक्सो पूर्णरुपले हावाले भर्ने । श्वास लिँदा बिस्तारै र शान्त तरिकाले लिने । यतिबेला पेट बाहिर जान्छ ।
३. दु्रत श्वास फ्याँक्ने
आमाशयलाई पछाडि धकेल्ने र सुईय गर्ने आवाजका साथ फ्याँक्ने । उक्त अवस्थामा शरीरका खराब त¤वहरु पेटबाट बाहिर फ्याँकिरहेको अनुभव गर्ने र फोक्सोभित्र हावा भरिएको अनुभव गर्ने । यतिबेला पेट भित्र धसिन्छ ।
४. राम्ररी आराम गर्ने
श्वास लिने र श्वास फ्याँक्ने क्रम दोहो¥याउँदै जाने र २० पटकसम्म गर्ने र पहिलो राउन्ड सकेपछि राम्रोसँग आराम गर्ने ।
१. वातकर्म कपालभाती
श्वास छाड्दा सक्रियतापूर्वक र श्वास लिँदा निष्क्रियतापूर्वक गर्नु ।
२. व्युत्कर्म कपालभाती
नाकभित्र पानी परेमा जोडले बाहिर फ्याँक्ने जस्तै प्रकारको कपालभाती ।
३. शीतकर्म कपालभाती
व्युत्कर्मको ठीकविपरीत र मुखले पानी लिने र नाकले फ्याँक्ने खालको कपालभाती ।
कपालभाति प्राणायामका फाइदाहरु
— यसले शरीरमा ताप उत्पन्न गर्छ र विषालु पदार्थ वा खराब त¤वहरु नष्ट गर्छ ।
— मिर्गौला र कलेजोको कार्यमा सुधार ल्याउँछ ।
— तनाव, पीर, चिन्ता र आँखाको डार्क सर्कल हटाउँछ । कम्तीमा ३० दिनभित्र अनुहारमा हुने यस्ता रक्तसञ्चारसम्बन्धी समस्याका कारण उत्पन्न हुने रोगहरु निको पार्छ ।
— प्रत्येक दिन कम्तीमा ५ देखि ८ मिनेटसम्म बेलुका कपालभाती गरेमा निद्रा नपर्ने समस्या समाधान हुन्छ र मीठो निद्रा लाग्छ ।
— कुण्डलिनी जागरण (सबै चक्रहरु सक्रिय बनाउने) गराई शरीरमा शक्ति र आनन्द प्राप्त भएको समाधि अवस्थाको अनुभव हुन्छ ।
— रक्तसञ्चार बढाउँछ र पाचन क्षमता बढाउँछ । न्यून रक्तसञ्चारका कारण हुने छालाको एलर्जी, कपाल झर्ने, हातखुट्टा चिसो हुने, नङमा सुख्खापन आउनेलगायत सबै समस्या समाधान गरी छालामा चमक ल्याउँछ । यसका साथै डन्डीफोरजस्तो समस्याको समेत सफलतापूर्वक उपचार गर्दछ ।
— मेटाबोलिज्म प्रक्रिया बढ्छ र दु्रततररुपले तौल घटाउँछ । दैनिक नियमपूर्वक कपालभाती गरेमा ४५ दिनभित्रमा १० किलोभन्दा बढी तौल घटाउन सक्ने एउटै उपाय कपालभाती हो ।
— पेटका अंगहरु उत्तेजित पार्छ, पेटका मांशपेसी बलियो बनाउँछ र मधुमेहमा समेत फाइदा गर्छ ।
— मस्तिष्क र स्नायुहरुलाई शक्ति प्रदान गर्छ । स्नायुको कमजोरीका कारण हुने थकावट, कमजोरी, टाउको दुखाइ, नपुंसकता, बाँझोपनजस्ता समस्याहरुको समाधान नियमित अभ्यास गरेको २५ देखि ३० दिनभित्र गर्छ ।
— शान्त र मनद्दमस्तिष्कमा आनन्दको अनुभूति गराउँछ ।
— सन्तुलनको अनुभव गराउनुका साथै आफूलाई शुद्ध र व्यवस्थित भएको अनुभव दिन्छ ।
— अम्लपित्त, अपच, मुटु पोल्ने, घाँटीसम्बन्धी र ग्याँससँग सम्बन्धित समस्या निराकरण गर्छ । यसका साथै कब्जियत र पायल्सजस्ता रोग पूर्णरुपले निको पार्छ ।
— फोक्सो बलियो बनाउनुका साथै कार्यक्षमता बढाउँछ र फोक्सोसँग सम्बन्धित सबै खालका रोगहरुको उपचार हुन्छ ।
— नियमित अभ्यासले सक्रिय बनाउनुका साथै अनुहारमा चमक ल्याउँछ ।
— स्मृतिमा सुधार ल्याउने र एकाग्रताको क्षमता बढाउँछ ।
— शरीरका सबै चक्रहरु सक्रिय पार्छ ।
— दम, पिनास र रौँ झर्ने समस्याको उपचारमा (टाउकोमा रक्तसञ्चार बढाइ) सहयोग गर्छ । साथै, कम उमेरमा रौँ फुल्ने समस्यासमेत समाधान गर्छ ।
— डिप्रेसनजस्ता समस्या समाधान र सकारात्मकताको विकास गराउँछ ।
— स्तन क्यान्सरको उपचार गराउँछ ।
— शरीरको रोगविरूद्ध लड्ने क्षमता बढाई शक्ति प्रदान गर्दछ । फलस्वरुप ज्वरो, रूघाखोकी, पिनास पर्नेजस्ता समस्या समाधान हुन्छन् ।
— यौन क्षमता बढाउने र शुक्रकीटको उत्पादन बढाउँछ ।
— महिलाहरुका लागि यो प्राणायाम वरदान नै हो । अनियमित महिनावारीदेखि अन्य समस्याहरु पनि करिब १५ दिनको नियमित अभ्यासबाट निको हुन थाल्छन् ।
– महिलाको पाठेघरमा हुने गिर्खाजस्तो समस्या पनि समाधान हुन्छ । तर, यसका लागि नियमितरुपमा कम्तीमा १५ मिनेट (९०० पटकको सास धकेलाइ) कुनै आराम नलिई गर्नुपर्छ ।
— मिर्गौलाको पत्थरीजस्तो समस्या पनि यो प्राणायामले समाधान गर्छ ।
— रगतमा क्याल्सियमको तह बढाई हाडहरु मजबुत बनाउँछ । यसका लागि कम्तीमा २ हप्ताको समयपछि नतिजा आउन थाल्छ । यसैगरी, रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रासमेत बढाउँछ । यसका साथै शरीरको दुखाइसमेत हटाउँछ ।
— बुढ्यौलीपन घटाउँछ । नियमित यस्तो प्राणायाम गरेमा आफ्नो उमेरभन्दा ८ देखि १० वर्ष कम देखिन्छ ।
कपालभाती प्राणायामका प्रतिअसरहरु
— उच्च रक्तचाप र हर्नियाको समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
— टाउको दुख्ने र रिंगटा लाग्न सक्छ ।
— कहिलेकाहीँ बान्ता हुनसक्छ ।
— मुख सुख्खा हुनसक्छ ।
— बढी मात्रामा पसिना तथा ¥याल उत्पन्न हुनसक्छ ।
कपालभाती प्राणायामका सावधानीहरु
श्वासप्रश्वास नै जीवन हो र यदि यसलाई विधिपूर्वक राम्रो आसनमा बसेर गर्न सकियो भने यसबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । धेरै फाइदा लिनका लागि ढिला नगरी कपालभाती सुरू गर्नुपर्छ, तर यो प्राणायाम गनुपूर्व निम्न सावधानीहरु अपनाउनुपर्छ । कपालभातीका लागिसमेत सबैभन्दा राम्रो समय बिहान खाली पेटमा हो तर खाना खाएको ४ देखि ५ घन्टापछिमात्रै अन्य अवस्थामा गर्न सकिन्छ ।
— उच्च रक्तचाप तथा मुटुका समस्या हुनेहरुले श्वासप्रश्वास बिस्तारै सुचारू गर्नुपर्छ ।
— कपालभाती बिहानको समयमा खाली पेटमा र केही समय ज्यान तताउने क्रियाकलाप गरेपछिमात्रै गर्नुपर्छ ।
— कपालभाती गरिसकेपछि कम्तीमा पनि २० देखि ३० मिनेटसम्म केही नखाने किनकि आमाशयलाई खाना पचाउन शक्ति सञ्चयको जरूरी पर्छ ।
— उच्च रक्तचाप तथा मुटुका रोग हुनेहरुले कपालभातीको दर विचारपूर्वक घटाएर गर्नुपर्छ र छारेरोग हुनेले कदापि गर्नुहुँदैन ।
— स्वास्थ्य परीक्षणपश्चात् आधिकारिक योग शिक्षकबाट सिकेरमात्रै कपालभाती गर्नुपर्छ ।
— गर्भवती तथा महिनावारी भएको बेला कपालभाती गर्नुहुँदैन ।
— ढाडको समस्या र हर्निया भएमा कपालभाती गर्नुहुँदैन ।
— यदि पेटको अल्सर छ भने सावधानीपूर्वक कपालभाती गर्नुपर्छ ।
— आधारभूत तहका प्राणायाममा दक्षता हासिल गरेपछिमात्रै कपालभातीजस्तो उच्च तहको प्राणायाम विधि अपनाउनुपर्छ ।
— कपालभातीका सीमितताहरुलाई ख्याल गर्दै यसको अभ्यास गर्नुपर्छ ।
— श्वासप्रश्वासका दमरोगजस्ता समस्यामा कपालभाती गर्दा निकै सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
— यदि पहिलोपटक यो अभ्यास गर्न थालेको हो र उमेर ४० वर्ष कटेको छ भने एक सेकेन्डमा एक झड्कामात्रै दिने, युवाहरुले २ झड्का प्रतिसेकेन्ड दिन सकिन्छ, तर २ झड्काभन्दा बढी १ वर्षसम्मको अभ्यासकर्ताले दिनुहुँदैन ।
अन्तमा, माथि उल्लेखित विभिन्न शब्दहरुको आधारमा कपालभाती प्राणायामले वैज्ञानिक तरिकाले जीवनलाई लाभ हुने भएकोले कपालभातीजस्तो प्राणायाम मानवजीवनका लागि वरदान हो । जबसम्म जीवन रहन्छ तबसम्म कपालभाती नियमितरुपमा गर्नु आवश्यक छ । मानवजीवनसँगै कपालभातीसमेत अनिवार्य आवश्यक भएकोले यसलाई जीवनकै एक अंग बनाउनु जरूरी छ । कपालभाती प्राणायामले कतिपय अवस्थामा जीवनको आयु बढाउने, जीवनदान दिने, जीवनमा अत्यन्तै उपयोगी हुने र कपालभाती नगर्दा जीवन स्वस्थ, सुन्दर र आनन्दित नहुने भएकोले कपालभातीलाई जीवनसाथी भन्न सकिन्छ ।
(लेखक मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पस, कावासोती नवलपुरका प्राध्यापक र योग शिक्षक हुन् ।)